The Age of Adaline (2015) – Gold Channel Movies
Love is timeless.Apr. 16, 2015USA112 Min.PG-13
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Romance/ Fantasy ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ဒါရိုက်တာ Lee Toland Krieger ရိုက်ကူးထားပြီး Blake Lively နဲ့ Michiel Huisman တို့အထူးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်လည်း လူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ lMDb 7.2/10 အထိရရှိထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ အသက်၂၉နှစ်အရွယ်နဲ့နှစ်၇၀ကျော်လောက်အသက်ရှင်နေထိုင်နေရတဲ့ အမျိးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကို ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသူတိုင်းနှစ်သက်သဘောကျမယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာရင် အိုခြင်းတရား သေခြင်းတရားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာမလွဲပါဘဲ။ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် အသက်၂၉နှစ်အရွယ်ကနေ တစ်ရက်လေးမှအိုမသွားဘဲ နုပျိလန်းဆန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေကို နှစ်၇၀ကျော်လောက်ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့လူအတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ အက်ဒါလင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတော့ အိုခြင်းတရားမရှိ သေခြင်းတရားမရှိတဲ့ သူမကိုယ်သူမ အရမ်းစိတ်ပျက်နေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အက်ဒါလင်ဘိုမန်းဟာ သူ့ခင်ပွန်းဆုံးပါးသွားပြီး ဆယ်လအကြာမှာ သမီးလေးနဲ့မိဘတွေရှိရာ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နှင်းတွေအရမ်းကျနေတာကြောင့် လမ်းချော်ပြီး ကားရောလူပါ မြစ်ထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့လျှပ်စီးတစ်ခု သူ့ကိုလာရိုက်ခတ်ပြီး သတိပြန်ဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး သူမဟာတစ်ရက်လေးမှအသက်ကြီးမသွားတော့တာ သူ့သမီးကတောင် အဘွားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အရွယ်ထိပါဘဲ။ သူမအသက်ကြီးမသွားတာကို လူတွေသတိထားမိမှာစိုးတဲ့အတွက် ဆယ်နှစ်ခြားတစ်ခါ နေရာတစ်ခုကနေတစ်ခုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲလစ်ဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့အမှတ်မထင်စုံမိရာက မေတ္တာမျှသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ်မိဘတွေဆီ အလည်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အဲလစ်ရဲ့အဖေဟာ သူနဲ့ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူဖြစ်နေပါတယ်။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့တစ်ထေရာတည်းတူတဲ့အမျိးသမီးတစ်ယောက်ကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ အဲလစ်အဖေ ဘယ်လောက်အံ့သြတုန်လှုပ်သွားမလဲ အက်ဒါလင်ကရော ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ အဲလစ်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်ပြေးသွားမလား ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ….
Size – 1GB / 430MB
IMDb Rating 7.2 155,819 votes
TMDb Rating 7.4 4,851 votes
Download Userdrive SD Myanmar 430MB